Budata UC Browser maka Windows
Free Budata maka Windows (1.20 MB)
Budata UC Browser,
UC Browser, otu nime ihe nchọgharị kachasị ewu ewu maka ekwentị mkpanaaka, eruola kọmputa na ngwa Windows 8, mana oge a, ndị otu wepụtara ezigbo desktọọpụ desktọọpụ na-enye ihe nchọgharị ga-aga nke ọma na Windows 7 ndị ọrụ PC.
Ihe nchọgharị ahụ, nke na-ekwusi ike banyere ịnye ahụmịhe dakọtara na ụdị mkpanaka ya; Ọ ejisie ike nyefee ibe edokọbara na gam akporo, iOS na Windows Phone ndị ọrụ nwere na ekwentị ha ma ọ bụ mbadamba ozugbo na desktọọpụ nchọgharị. UC Browser, nke a na-enye nefu ka ọ dị na nsụgharị mobile, bụ ihe nchọgharị nke na-eto ruo ọtụtụ afọ ma jiri nwayọ na-abịakwute ndị asọmpi ya, nke bụ ndị dike nke ahịa ahụ.
Enwere ike ịchọta atụmatụ achọrọ nchọgharị nke oge a na UC Browser. Ihe nchọgharị ahụ, nke gụnyere ọrụ niile dị ka windo incognito, nkwado nkwụnye, na njikwa ndokwa ibe, ewetawokwa ahụmịhe ya na ikpo okwu mkpanaka na desktọọpụ. Nchịkwa nhọrọ kachasị dị na nke a bụ na ị nwere ike ekenye iwu iji dọrọ mmegharị site na ịpị aka nri.
O kwere omume ihu na UC Browser, nke nwere ọfụma mara mma ma dịkwa mfe nghọta, na-amụrụ ihe site na ihe nchọgharị dịka Chrome, Firefox na Opera. Ihe nchọgharị ahụ, nke na-etinye akara dị ka bọtịnụ Firefox a ma ama na aka ekpe, na-enye menu nhọrọ nke ejiri gị site na Opera ma ọ bụrụ na ị pịa ebe a. Agbanyeghị, agbanyeghị na ụdị nke taabụ ahụ dị iche, enwere ike ijide mmụọ nke Google Chrome na anya.
Ọ bụrụ na ị pịa akara ngosi akwa akwa na akuku aka nri elu, ndepụta isiokwu a tụrụ aro ga-apụta na taabụ ọhụrụ. O siri ike ikwusi ike na àgwà nke isiokwu ndị dị njikere, nke a na-enye ya na agba na aghụghọ nke ga-amasị ndị ọgbọ niile, dị ezigbo mma, ọbụlagodi na ụdị dị ole na ole. Ozugbo ị wụnye ya, ịnwere ike ibubata ibe edokọbara ndị ọzọ nke ihe nchọgharị gị na sekọnd ole na ole, yabụ na ịnweghị ịpinye ihe mgbakwunye dị ka Adobe Flash. Nwere ike ịlele vidiyo Facebook na YouTube ozugbo ị jiri UC Browser.
Ekele dịrị onye njikwa faili maara ihe, ebe ị nwere ike ịmaliteghachi nbudata nbibi gị mgbe e mesịrị, ị nwere ike ịga nihu ọrụ gị site na isi ebe njikọ ahụ gbajiri. Maka ahụmịhe mmiri na-asọfụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, ibe ndị ị gara na-abịa mgbe niile na usoro preload maka gị ma ị nwere ike iru peeji ịchọrọ site na oge ịpịrị.
UC Browser, nke nwere ike ijikwa nhọrọ ịmekọrịta igwe ojii na-enweghị mkpa maka mmemme ọzọ, na-eme ka ọ dị mfe ịkwaga adreesị njikọ ị soro na ekwentị mkpanaaka gị na desktọọpụ gị dị ka ibe edokọbara. Ihe ị ga - eme maka nke a bụ pịa akara ngosi dị na nri aka nri nke akara ibe edokwubara.
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na ihe nchọgharị ochie gị ma na-achọ ihe nchọgharị ọzọ, UC Browser bụ nhọrọ kwesịrị imeju ọchịchọ gị.
UC Browser Ụdịdị
Nha faịlụ: 1.20 MB
Mmepụta: UCWeb Inc